Ihe niile gbasara ụmụ akwụkwọ
Nzuzo na kuki amụma
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ
Ị jụrụ: Gịnị bụ agụmakwụkwọ na ihe ndị dị na ya?
Kedu ihe bụ agụmakwụkwọ na ihe ndị mejupụtara ya? A na-aghọta akụkụ nke agụmakwụkwọ dị ka ndị na-etinye aka na usoro mmụta, ma ndị a bụ ndị mmadụ, ihe, ihe omume, wdg. Dị ka Lemus (1973) siri kwuo, n'ime isi ihe mmụta anyị nwere: onye na-amụ ihe, onye nkuzi na isiokwu na ndị ọzọ dabara na nkewa ndị a. Kedu ihe bụ...
Categories Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ
Gịnị bụ agụmakwụkwọ dị ka akwụkwọ?
Gịnị bụ agụmakwụkwọ dị ka akwụkwọ? Site n'echiche nke ọha mmadụ, a na-eche mmụta dị ka usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke na-achọ ime mgbanwe na ntinye nke isiokwu ahụ na gburugburu ebe obibi ya na nke anụ ahụ, site n'inweta ihe ndị dị na omenala (asụsụ, nkà, omenala). , àgwà, ụkpụrụ, ụkpụrụ, wdg,). Gịnị bụ…
Azịza kacha mma: Kedu ka agụmakwụkwọ dị n'oge ochie?
Olee otú agụmakwụkwọ dị na Gris oge gboo? Ihe ọmụmụ a mụrụ bụ trivium (grammar, retoric na philosophy) na quadrivium (mgbakọ gbasara mgbakọ na mwepụ, egwu, geometry na mbara igwe), na-amata ọdịiche dị n'etiti isiokwu mmadụ na nke ezi uche dị na ya, bụ ndị rurula agụmakwụkwọ ọgbara ọhụrụ. A na-ebu ụzọ mụọ akwụkwọ ozi ndị ahụ n’olu dara ụda, e mesịakwa mụọ akwụkwọ ozi ndị e dere ede. …
Kedu ihe bụ isi ikike na ụlọ akwụkwọ sekọndrị?
Gịnị bụ 7 isi ikike? Ikike isi 7 ndị a bụ: Nkwukọrịta asụsụ (CCL) Competence mgbakọ na mwepụ na ntozu ntozu na sayensị na teknụzụ (CMCT) Digital Competence (CD) Initiative and Entrepreneurial Spirit (IEE) Learning to learn (AA) Social and Civic Competences (CSC) Mmata na Okwu Omenala (CEC) Gịnị bụ ikike isi pụtara? A na-eche na…
Kedu akụkụ ihe ọmụma na agụmakwụkwọ praịmarị?
Kedu akụkụ ihe ọmụma na mbụ? N'ọkwa agụmakwụkwọ praịmarị anyị na-ahụ: Mpaghara mgbakọ na mwepụ. Mpaghara nkwukọrịta. Mpaghara ndị ọrụ na-elekọta mmadụ. Sayensị na gburugburu ebe obibi. Kedu akụkụ agụmakwụkwọ? Mpaghara usoro ọmụmụ bụ usoro ihe ọmụmụ nke a na-ewere dị ka ihe jikọrọ ya na ibe ya. Ihe…
Ajụjụ a na-ajụkarị: Ebee ka agụmakwụkwọ na-eme?
Ebee ka agụmakwụkwọ na-eme? Agụmakwụkwọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na ndụ mmadụ, nke na-eme n'ụzọ bụ isi n'ime ezinaụlọ wee na ọkwa dị iche iche nke ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ndụ agụmakwụkwọ nke onye ahụ na-agafe (site na ụlọ akwụkwọ ọta akara ruo mahadum). Kedu ka e si eme agụmakwụkwọ? …
Kedu nkà iji tinye n'ọrụ na agụmakwụkwọ anụ ahụ?
Kedu nka m tinyere n'ọrụ na nkuzi anụ ahụ? Ihe omuma nke ohere ikwuputa nke nwa, njikwa postural, iku ume na echiche nke oge-oge. Mara akụkụ nke atụmatụ anụ ahụ, nguzozi, usoro ụda, izu ike na nhazi oge oghere. Ọmụma nke isi ike anụ ahụ na àgwà nke ije. Gịnị bụ ihe atụ nka anụ ahụ? Ha bụ ike, ntachi obi,…
Kedu àgwà ahụike ahụike nke mmụta anụ ahụ?
Kedu ihe bụ omume iri ahụike? Ndụmọdụ iri a ga-enyere gị aka imezu ya, Soro nri dị mma na nke ziri ezi. … Jikwaa ibu gị. … Belata oriri nnu. … Nweta ụra zuru oke. … Gbalịa ibelata nchekasị. … Na-emega ahụ́ mgbe nile. … Zere ịṅụ sịga. … Wepụ onwe gị na anyanwụ kwa ụbọchị. …
Kedu njikọ dị n'etiti agụmakwụkwọ anụ ahụ na omume nke ụkpụrụ?
Kedu ka mgbatị ahụ si emetụta ụkpụrụ? Egwuregwu na-achịkọta mmetụta na mmetụta, ma karịa ihe niile ọ nwere ike imetụta àgwà na àgwà ndị mmadụ, site na ụkpụrụ ndị ọ na-enye: mgbalị, imeziwanye onwe onye, ​​nnọgidesi ike, nha anya, nkwanye ùgwù, egwuregwu, ịdị n'otu na enyi, ihe ịga nke ọma nke onwe na nke mkpokọta, n'etiti ọtụtụ ndị. ndị ọzọ. Kedu ụkpụrụ ndị emetụtara…
Azịza kachasị mma: Kedu ka agụmakwụkwọ dị na ndụ taa?
Kedu ka agụmakwụkwọ dị maka ndụ? Education for Life bụ usoro na-akwado nwa ahụ ka ọ na-eche ihe ịma aka nke ibi ndụ dị ka mmadụ aka, na-enyere ya aka inwe nguzozi na nkwekọ n'ihe ọ bụla ọ na-eme. Ihe anyị na-ekwu n'ezie bụ ịkwado ha maka...
Page1 Page2 ... Page3,897 Osote →
Bienvenido na blọgụ m! Aquí hay artículos relacionados con los estudiantes. Se consideran varios aspectos de la vida estudiantil, la asistencia al estudiante y la ordenación del trabajo. Contiene información útil. Aquí puede leer artículos interesantes sobre la redacción de tesis y pruebas de términos, participar en discusiones sobre los problemas planteados.
¡ATENCIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS! ¡Todos los materiales se publican en el sitio etrictamente na fines informativos na educativos! Si cree que la publicación de cualquier material infringe sus derechos de autor, asegúrese de contactarnos a través del formulario de contacto y su material será eliminado.
© 2022 Ihe niile gbasara otu ụmụ akwụkwọ